Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - 5.5.4 Enable tsy nampoizina
Ary fa manana olona heterogeneous fiaraha-miasa amin'ny olana manan-danja ara-tsiansa, ary manana ny loha laharana amin'ny toerana mety ho tena sarobidy, dia azo antoka ny hamela toerana ho azy ireo mba hahagaga anao. Tena tsara tarehy mangatsiatsiaka ny olom-pirenena mpahay siansa ao amin'ny vahindanitra misy soratra hoe Galaxy Zoo sy miforitra amin'ny Foldit proteinina. Kanefa, mazava ho azy, izany no tetikasa ireo dia natao mba hahafahan'ny. Inona no mahavariana kokoa, araka ny hevitro, dia fa ireo vondrom-piarahamonina ara-tsiansa no namoaka vokatra izay ampoizina na dia araka ny mpamorona. Ohatra, ny Galaxy Zoo fiaraha-monina no nahita sy vaovao kilasy Momba ny Kintana zavatra fa hoe "Green pitipoà."
Ary nony maraina koa ao amin'ny Galaxy Zoo tetikasa, olona vitsivitsy no nahatsikaritra tsy mahazatra maitso zavatra, fa miahy azy ireo crystallized rehefa Hanny Von Arkel, ny holandey sekoly mpampianatra, nanomboka ny fahamaiton'ny taretra ao amin'ny Galaxy Zoo Forum amin'ny manintona lohateny: "Omeo pitipoà ny fahafahana. "ny kofehy, izay nanomboka Aogositra 12, 2007, nanomboka tamin'ny vazivazy:" Moa ve ianao nanangona azy ireo ny sakafo hariva? "," pitipoà mijanona ", sy ny sisa. Nefa, tsara tarehy ela Zooites hafa nanomboka namoaka ny pitipoà. Rehefa nandeha ny fotoana ny lahatsoratra lasa kokoa ara-teknika sy ny tsipiriany mandra lahatsoratra toy izany nanomboka mampiseho ny: "Ny OIII andalana (ny 'pea' tsipika amin'ny 5007 angstrom) fa ianao no manaraka Nifandimby manoloana ny mena tahaka ny Z mitombo sy manjavona any an-infra-mena amin'ny momba ny Z = 0,5, izany hoe tsy hita " (Nielsen 2012) .
Rehefa nandeha ny fotoana dia tsikelikely ny Zooites fahatakarana sy systematizing ny fandinihana ny pitipoà. Farany, tamin'ny 8 Jolay, 2008, efa ho herintaona taty aoriana-Carolin Cardamone, ny astronomia nahazo diplaoma mpianatra ao amin'ny Yale sy ny mpikambana ao amin'ny Galaxy Zoo ekipa, nanatevin-daharana ny kofehy mba hanampy tamin'ny fandaminana ny "pea Hunt." More mafana fo ny asa taorian'izay ary ny Jolay 9, 2009 taratasy efa nivoaka tao amin'ny isam-bolana Notices ny Royal Society Takelaka Momba ny Kintana sy ny lohateny "Galaxy Zoo Green pitipoà: Discovery ny Kilasy Compact Tena Kintana-fiforonana vahindanitra" (Cardamone et al. 2009) . Nefa, liana amin'ny pitipoà tsy nifarana teo. Taty aoriana, dia efa bebe kokoa ny momba ny fikarohana ny astronoma manerana izao tontolo izao (Izotov, Guseva, and Thuan 2011; Chakraborti et al. 2012; Hawley 2012; Amorín et al. 2012) . Avy eo, tamin'ny 2016, latsaky ny 10 taona taorian'ny voalohany Zooite lahatsoratra iray, ny taratasy tolo-kevitra nivoaka tamin'ny Zavaboary Green pitipoà ho toy ny fanazavana mety ho manan-danja sy Saro modely ao amin'ny ionization eo amin'izao rehetra izao. Tsy izany ve no sary an-tsaina, rehefa Kevin Schawinski sy Chris Lintott niresaka voalohany Galaxy Zoo ao amin'ny Pub any Oxford. Soa ihany fa nanampy ireo Galaxy Zoo karazana tsy ampoizina tsy ampoizina fotsiny mamela mpandray anjara mba hifandraisana amin'ny tsirairay.